China Pumpkin ukuthambisa can ifektri abakhiqizi | Honghui Ingilazi
Ibhotela lamafutha omnqumo
I-High Boron Silicon Storage Tank
I-vase yetafula elincane
Isitsha sesitayela saseYurophu
Imbewu encane emile okusanhlamvu imbali
Ithanga ukuchelela can
Amabhodlela angama-200 ml aromatherapy
Crystal idayimane ingilazi okusobala lwezibani
Ibhodlela le-soda elinomthofu elingena-1000ml
Ibhodlela lamafutha omnqumo oluhlaza okwesibhakabhaka oluhlaza elingu-500 ~ 1000ml
IDizayini YERETRO - La manzi angaba ne-retro ne-vintage design engahlobisa futhi igcwalise ingadi yakho.
I-PUMPKIN STYLE - tshala umnumzane ngomklamo wethanga ngombala ohlukile.
I-NOZZLE EPHAMBILI - I-atomization enhle, umlomo wombhobho ongashintshwa, ungafutha inkungu noma umugqa oqondile.
UMKlamo OMUDE WOKUGCINA - Uza nombhobho wepulasitiki omude, okuvumela ukuthi unisele izitshalo ezincane kalula.
ISICELO ESIBALULEKILE - Ilungele zonke izidingo zomndeni wakho ezibandakanya ukuhlanza, ukutshala, imikhiqizo yokuhlanza, uwoyela obalulekile, izitshalo nezimbali ezichithekayo, ukushiya amaphutha nokuhlanza amawindi. nokunye ukusetshenziswa okuningi.
ISITAYELA SEPOMPKIN: Leli bhodlela lokufafaza elenzelwe ukwakheka okuhle kwamathanga nepompo ephezulu yevintage. Idizayini ende yombhobho ene-atomization enhle, ungafafaza inkungu yamanzi ngomshini we-gent.
IZINTO EZIQHUBEKA: Zenziwe nge-PP ne-PET impahla, engasindi futhi ihlala isikhathi eside, akukho lula ukuyiphula. Ibha yengcindezi yokulingisa ye-Retro, ukubukeka okuhle, okulula ukuyisebenzisa.
KULULA UKUSETSHENZISWA: Leli bhodlela lokufafaza linokuphatha okuyi-ring-finger elula futhi lingagcwaliswa kalula ngokususa okuphezulu. Ungafafaza inkungu yamanzi ngokucindezela okuthambile, okulula ukufafaza izitshalo ezincane.
ISICELO ESIKHULU: Ilungele ukunisela izitshalo zasendlini, njengezitshalo ezinamanzi, ama-fern, ama-orchid, izitshalo zomoya, nazo zilungele izidingo zasendlini yakho kubandakanya ukuhlanza, ukukhanda izinwele, njll.
Izinsiza kusebenza ze-Antique Izitshalo Zokunisela Izitshalo Izimbali Izimbali Zengilazi Amathuluzi Wokupheka Amathuluzi aphathekayo Ubuhle obungagcwaliseka ithuluzi lokuhamba lezimonyo Izitshalo Ezincane Izimbali Ingadi yesifutho ithuluzi lokunisela ingadi inganisela.
Ukuma okuhle kwamathanga, amancane futhi alula, ungafafaza inkungu, Ukunisela imbali nokunisela izitshalo ukwenza impilo ibe ngcono.
Umklamo wokubacindezela we-kettle wesandla, kulula ukuyisebenzisa. Ibha yengcindezi yokulingisa i-Retro, ukubukeka okuhle, okulula ukuyisebenzisa, Cindezela isifutho samanzi, isifutho esihle, ngeke sinisele kakhulu, Ingalungisa ingcindezi yamanzi, kulula ukuyisebenzisa futhi elula.
Ilungele ukuchelela izitshalo ezincane ngaphakathi kwendlu yakho nehhovisi. I-Cute Retro Umumo Wethanga Ingilazi Yokunisela Imbiza Isitshalo Imbali Yebhodlela Isitshizi Sesandla Isitshalo esihle Izimbali Ingadi Ingilazi Ibhodlela le-retro ithanga ukuma isifutho sokunisela imbiza isandla ingcindezi yesifutho ibhodlela lembali.
Langaphambilini I-origami vase
Olandelayo: Izindlebe ukumnika isikhwama noma ibhodlela
I-Glass Flower Vase
Ukuhlobisa kwe-Glass Vase
I-Glass Vase enkulu
Amabhasikidi Amade Engilazi
Izindlebe ukumnika isikhwama noma ibhodlela
Imikhiqizo yengilazi yeXuzhou Honghui Co., Ltd. yamukela amakhasimende avela kuwo wonke umhlaba, sibheke phambili ekubeni ngumlingani wakho onokwethenjelwa!
Ibhodlela lengilazi elisebenzisekayo
Ingabe uyazi? Kunezinhlobo eziningi zama-glas ...
Uyazi ukuthi ungenza kanjani amabhodlela engilazi？